Uru anyị - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
ỌMA N’IME IHE Ọ B WER WE ANY WE NA-EME
Anyị raara onwe anyị nye ịnye ngwọta nkwakọ ngwaahịa kachasị mma maka ndị ahịa anyị, yana ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ na ọhụụ.
Anyị na-agba mbọ itinye ndị ahịa anyị mbụ na na-enye ọkwa kachasị elu nke ndị ahịa na afọ ojuju na usoro niile. Anyị ga na-emeghe ọnụ, na-akwụwa aka ọtọ, ma na-ekwurịta okwu. Anyị na-agbasi mbọ ike mgbe niile ịtụle mkpa ndị ahịa anyị ma nye ihe ngwọta nkwakọ ngwaahịa kachasị mma, n'agbanyeghị agbanye ala anyị.
AKW QKWỌ KWES ATR AT N'ATLỌ AKA
Anyị na-enye ha abụọ Ngwaahịa na Ngwaahia nkwakọ ngwaahịa, dabere na mkpa ndị ahịa anyị. A na-echekwa ngwaahịa ngwaahịa anyị nke ọma ma debe ya n'ụlọ nkwakọba anyị.
Inglọ nkwakọba ihe Keming, dị njikere iji ụgbọ mmiri gaa na oge ụfọdụ, ebe ngwaahịa anyị nwere ike ịme, mechaa, ma bipụta iji zute ụdị pụrụ iche nke akara gị, site na ọtụtụ Ọrụ Nhazi. Ma ị na-achọ ngwaahịa dị elu ma ọ bụ nke kachasị mma na nkwakọ ngwaahịa ahaziri, anyị nwere ngwaahịa na ọrụ kachasị mma iji gboo mkpa gị ma gafee atụmanya gị.
Ebumnuche akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Anyị emejuputala atumatu atumatu gbadoro anya na iwepu mkpofu ma kwalite arụmọrụ, yana gbasaa iji wepụta nkwakọ ngwaahịa na ihe eji emegharị emegharị na nke recyclable Anyị na-etinye aka na ịbụ onye na-emepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ma na-achọ mgbe niile iji meziwanye ma mezie usoro anyị iji belata mmetụta anyị na mbara ala.
AKW PRKWỌ AKW PRKWỌ
Iji tinye nchekwa nchekwa ọzọ iji hụ na ị ga-enweta agbanwe agbanwe, ịdị mma, ma baa uru oge ọ bụla ị na-arụ ọrụ anyị, anyị abụọ asambodo ISO 9001 na ISO 14001. Anyị bụkwa ụfọdụ ndị isi mba ụwa na ndị anyị na-arụ ọrụ. Asambodo ndị a na audits na-egosi na ị ga-enweta ngwaahịa kachasị mma, oge ọ bụla.